Tanora · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Tanora
Afrika Mainty27 Avrily 2022
Amerika Latina13 Avrily 2022
Tantara mikasika ny Tanora
Karaiba 1 herinandro izay
Ao anatin'ny tontolon'ny herisetra iainan'ny firenena - natahotra ny momba ilay zaza ny olom-pirenena ary henjana ny rivotra iainana ao amin'ny tontolom-bolongana eo an-toerana.
Fotoana izao hanovàna ny fomba fijerintsika an'ireo ankizy taiditra anaty andian-jiolahy.
Lesoka eo amin'ny fanadinana fidirana ao amin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa ao Trinite sy Tobago ahariharin'ny tsy fahombiazan'ny maripakasitrahana
Mampametra-panontaniana momba ny tsy fitanilàna sy ny tena ilàna azy ny fahavotsavotsàna eo amin'ny fizotry ny fanomezana naoty amin'ny Fanadinana fitsapàna hidirana eo amin'ny Sekoly Ambaratonga Faharoa (SEA) ao Tobago sy Trinidad
Mitohy ho fanamby lehibe iray ny fandikàna ny fiteny Kikuyu. Maniry ny Shagz Chronicles mba hatao fenitra eo amin'ny fiainana andavanandro ny Kikuyu am-bava sy an-tsoratra, na amin'ny aterineto izany na any ivelany.
Karaiba 11 Avrily 2022
Efa ratsy ara-tantara ny fitondràna an'ireo rastafariàna ao Jamaika, ary niteraka ireo olana tsy voavaha ny fanapaham-bolo an-kery nanjo ilay tovovavy.
Afrika Mainty 22 Marsa 2022
Mpanao gazety sady mpikatroka pelaka Azerbaijani nisy namono
Niteraka hatezeram-bahoaka tao amin'ny sehatry ny tambajotra sosialy i Hafizli, ka maro ireo mpikatroka nitsikera ny tantaran'ny tsy fandraisana andraikitra tao Azerbaijan rehefa miresaka momba ny heloka bevava amin’ny fankahalana, indrindra indrindra. ireo mikendry vondrona voahilikilika ao amin'ny firenena.